गृहमन्त्रीको हातमा निर्मला हत्याबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अब के होला ? – Pahilo Page
गृहमन्त्रीको हातमा निर्मला हत्याबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अब के होला ?
९ आश्विन २०७५, मंगलवार १३:२८ 400 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ९ असोज । निर्मला पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कञ्चनपुरमा गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वको टोलीले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल”लाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले प्रतिवेदनमा घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीयवासीको भनाइ, प्रहरी अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीलाई समावेश गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।